समाचार - कसरी मांस उद्योग मा ग्राहकहरु आकर्षित गर्न?
कसरी मासु उद्योग मा ग्राहकहरु आकर्षित गर्न?
व्यक्तिको जीवनस्तरको सुधारको साथ, मासु खाना बिस्तारै जनताको आहारको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ। गर्मी को एक निश्चित डिग्री संग मानव शरीर प्रदान गर्नुको साथै, यसले मानव विकास र विकास र स्वस्थ राख्नको लागि आवश्यक पोषकहरू पनि प्रदान गर्दछ।
१. कार्यात्मक मासु उत्पादनहरू
यसले केहि स्वास्थ्य देखभाल प्रकार्यहरू, ट्रेस एलिमेन्टहरू र पोषण फोर्टिफायरहरूसहित मासु उत्पादनहरूलाई जनाउँछ जुन उचित क्यारियरहरूको माध्यमबाट परम्परागत मासु उत्पादनहरूमा थपिन्छन्, र प्रशोधनको प्रक्रियामा उच्च तापमान, उच्च चाप र पीएच मूल्यबाट प्रभावित हुँदैनन्। शुद्ध प्राकृतिक खाद्य गुणस्तर धारणा एजेन्ट (संरक्षक) खाए पछि केहि स्वास्थ्य सेवाको उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ। कम क्यालोरी, कम नाइट्रेट र कम नुनको साथ कार्यात्मक मासु उत्पादन गर्न कसरी अवस्थित संसाधनहरूको पूर्ण उपयोग गर्ने, जसले शरीरको कार्यलाई नियमित गर्न, रोग प्रतिरोध क्षमतामा सुधार गर्न, ढिलाइ बढाउन र शारीरिक तन्दुरुस्ती बढाउन सक्दछ, नयाँको विकासले सामना गरेको नयाँ बिषय हो। चीन मा मासु उत्पादनहरु।
२. कम तापमानको मासु उत्पादन
चिनियाँ मासु उत्पादनहरू हम ससेज जस्ता विभिन्न आहार बानी र लोकप्रियताको कारण, चीनमा मासु उत्पादनको खपत संरचना अझै पनि मध्यम र उच्च तापक्रमको मासु उत्पादनको अधीनमा छ। जापानी बजारमा, घरेलु खपतमा तीन प्रकारका कम-तापक्रम मासु उत्पादन (बेकन, हेम, ससेज) को अनुपात 90 ०% सम्म उच्च छ, र कम तापमानको मासु उत्पादनहरू मुख्य उपभोक्ता हुन्। कम-तापक्रमको मासु उत्पादनको प्रसंस्करणको बेला, प्रोटिनलाई ठिक्क मात्रामा निषेध गरिन्छ, मासु दृढ, लोचदार, चेइ, कोमल, कुरकुरा र रसीला हुन्छ, जसले अधिकतम हदसम्म मूल पोषण र अन्तर्निहित स्वाद राख्न सक्छ। यो गुणस्तरमा उच्च तापमान मासु उत्पादनहरू भन्दा उत्कृष्ट छ। व्यक्तिको जीवनस्तरको सुधार र स्वस्थ आहार अवधारणाको सुदृढीकरणको साथ, कम-तापक्रम मासुको उत्पादनले मासु बजारमा प्रमुख स्थान ओगटेको छ। हालका वर्षहरुमा, कम तापमानको मासु उत्पादन बिस्तारै अधिक र अधिक उपभोक्ताहरु द्वारा मनपराएको छ, र मासु उत्पादनहरु को खपत मा एक गर्म स्थान भएको छ।
वर्तमानमा, नयाँ मोडेलहरू, नयाँ ढाँचाहरू र नयाँ खपत लगातार उदाउँदछन्, र बजारका मुख्य उपभोक्ताहरू 80० पछि विशेष गरी-० दशक पछिका हुन्। चीनमा लगभग 5050० मिलियन मानिस छन्, कुल जनसंख्याको एक तिहाइको लागि जिम्मेवार छ। तिनीहरूसँग सक्रिय र बलियो क्रय शक्ति छ। 80० र 90 ० दशकको भान्सामा औसत काम गर्ने समय प्रति व्यक्ति १ घण्टाबाट २० मिनेटमा झरेको छ, र तिनीहरूले प्राय: अर्ध-समाप्त व्यंजनहरू प्रशोधन गर्छन्। धेरै व्यक्ति घरमा पकाउँदैनन्, र खाना र अर्डर खानको लागि यो सामान्य भएको छ। उही समयमा, सम्पूर्ण समाजको उपभोग माग पनि फुर्सतको प्रवृत्ति देखाउँदै छ। यी सबैले क्याटरिंग उद्योग र मासु प्रसंस्करण उद्योगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउनेछ, उत्पाद संरचना, व्यवसाय मोडेल, स्वाद र स्वाद, मानक उत्पादन र अन्य पक्षहरूको सुधार परीक्षाको कागजात बन्न। इन्टरनेट क्याटरिंग टेकआउटको आधारभूत आवश्यकताहरू स्वाद, द्रुतता र सुविधा हुन्। यसको लागि शेफको अपरेशनको सरलीकरण र डिश स्वादको मानकीकरण आवश्यक पर्दछ। प्रसंस्करण + सिसनिंग, प्लेट प्लेसिंग र साधारण हलचल फ्राई्ग भविष्यमा मासु उत्पादन प्रसंस्करण उद्योगको नयाँ दिशाहरू हुन्, जस्तै हटपट, साधारण खाना, फास्ट फूड, ब्रेकफास्ट र अन्य मासु उत्पादनहरू।
फुर्सतको जीवनको क्रमिक लोकप्रियताको साथ, फुर्सतको भोजनको उपभोग बढ्दै गइरहेको छ, र यो आजको समाजमा उपभोग गर्ने फेसनको एक प्रकार भएको छ। बजार बिक्री मात्रा छिटो बृद्धि हुन्छ %०% - %०% को बृद्धि प्रत्येक बर्ष। फुर्सतको मासुको उत्पादनमा चार खपत सुविधाहरू हुन्छन्: स्वाद, पोषण, रमाईलो र विशेषता। फुर्सतको मासु उत्पादन गर्ने उपभोक्ताहरूमा बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, शहरी सेता-कलर मजदुरहरू, वयस्कहरू र बुजुर्गाहरू सामेल छन्। ती मध्ये, बच्चाहरू, किशोर र शहरी श्वेत-कॉलर कामदारहरू खपतको मुख्य शक्ति हुन् वा नयाँ उत्पादनहरूको प्रवर्तक हुन्, र तिनीहरूको मूल्य स्वीकृति क्षमता बलियो छ। स्वाद भनेको फुर्सतको मासु उत्पादन गर्ने आत्मा र उपभोक्ताहरूलाई आकर्षित गर्न सबैभन्दा घातक हतियार हो। परम्परागत स्वाद मांसको उत्पादनहरु (कुखुरा, सुँगुर, गाईको मासु, माछा, बारबेक्यू, आदि) फुर्सद खपत को आवश्यकताहरु पूरा गर्न गाह्रो छ, त्यसैले स्वाद को नवीनता सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ।
चिनियाँ परम्परागत मीट उत्पादनहरूको history००० बर्ष भन्दा बढीको लामो इतिहास छ। लामो इतिहासमा, कच्चा मासु बार्बेक्युदेखि पकाएको मासु प्रशोधन सम्म, चिनियाँ परम्परागत मासु उत्पादन बिस्तारै देखा पर्‍यो। १ 19 औं शताब्दीको मध्यमा, पश्चिमी शैलीको मासु उत्पादनहरू चीनमा थालिएको थियो, जसमा दुई किसिमका मासु उत्पादनहरू एक साथ रहन र विकसित भए।